Dr Afyare Cilmi "Dowladda Farmaajo Waxba kama Duwan Maamulkii Xasan Sheekh".
Saacado yar kadib markii la caleema saaray Hoggaamiyaha cusub ee dowladda Federaalka ayay aqoonyahanada Soomaalida iyo falanqeeyayaashu aragti isku mid ah ka bixiyeen waxa ay qaban karto xukuumadda Cusub.
Xasan sheekh ayaa looga adkaaday doorashadii madaxtinimo
Afyare Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qadar ee Magaalada Dooxa ayaa Idaacadda Codka Mareykanka VOA u sheegay in dowladda cusub ee Farmaajo aysan waxban ka duwanayn maamulkii ka horreeyay ee Xasan Gurguurte.
Wuxuu sheegay in ballanqaadka Farmaajo ee afar arrimood uu dhammaantood horay ugu fashilmay Xasan Gurguurte arrimahaas oo kala ah 1-sugidda maniga 2-ladagaallanka Musuq maasuqa 3- gurmadka abaaraha 4- baahinta dib uheshiisiinta soomaalida.
Dhammaan Afartan qodob waxay kamid ahaayeen Lixdii Tiir ee Xasan Sheekh Ballanqaaday bishii September 2012 balse uu ku fashilmay taasi bedelkeedna uu sii kordhiyay dhibaatada Soomaaliya.
"Khudbadda Madaxweynaha wax sidaas uweyn ugama duwanayn balanqaadyadii uu horay ujeediyay Xasan Sheekh waxaan dhihi karnaa waa lixdii tiir ee madaxweynihii hore oo laba tiir dhiman” sidaas waxaa yiri aqoonyahan Soomaaliyeed.
Dowladda Mareykanka Oo Xasan Sheekh Maxamuud U Diiday Fiisaha Dal kugalka.